के तपाईलाई थाहा छ फेसबुकका यी शर्टकट ? - Khabar Break | Khabar Break
के तपाईलाई थाहा छ फेसबुकका यी शर्टकट ?
के तपाईंलाई थाहा छ, फेसबुक ब्राउज गरेको बेला L बटन प्रेस गर्नुभयो भने तपाईले त्यसबाट त्यो अपडेटलाई लाइक गर्नसक्नुहुन्छ जहाँनेर तपाईं हुनुहुन्छ । सामान्यतया, प्रयोगकर्ताहरु जिमेलका लागि शर्टकटको प्रयोग गर्दछन् तर, फेसबुकलाई शर्टकटमा चलाउनेबारे धेरै प्रयोगकर्ताहरुको कम ज्ञान छ ।
यदि तपाई फेसबुकमा अकाउन्ट खोल्ने एक बिलियन मानिसमध्ये हुनुहुन्छ र नियमित यसलाई चलाउनुहुन्छ भने तपाईंलाई यी शर्टकटहरु जान्नु निकै जरुरी छ ।
j र k प्रेस गरेर तपाई आफ्नो न्यूज फीडका स्टोरीहरुलाई स्क्रल अप र स्क्रल डाउन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तलमाथि सार्न सक्नुहुन्छ । p लाई प्रेस गरेर तपाईं नयाँ स्टाटस पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ । l प्रेस गरेर तपाई कुनै अपडेटलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ ।
c लाई प्रेस गरेर तपाईं कुनै पनि सेलेक्टेड स्टाटसमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ । s लाई प्रेस गरेर तपाईले सेलेक्टेड स्टाटसलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ ।0लाई प्रेस गरेर तपाई कुनै पनि स्टाटस अपडेटको एट्याचमेन्टलाई खोल्न सक्नुहुन्छ ।
पोस्ट गरिएको स्टाटस पूरै हेर्नको लागि तपाईले enter क्लिक गर्नसक्नुहुन्छ । यसैगरी / – सर्च- q बाट तपाईले च्याट गरिएको कुनै शब्द वा सामग्री खोज्न सक्नुहुन्छ ।
अलग अलग ट्याब्समा जानको लागि फेसबुकले पनि एक्सेसलाई सपोर्ट गर्दछ । फरक फरक वेब ब्राउजर्स र अपरेटिङ सिस्टम फरक कम्बिनेशनका स्ट्रोकको प्रयोग गर्दछ ।
कम्प्युटरमा इन्टरनेट एक्सप्लोररका लागि Alt + #, then Enter । पीसीमा क्रोमका लागि Alt + # । पीसीमा फायरफक्सका लागि Shift + Alt + # । म्याकमा सफारी, फायरफक्स र क्रोमका लागि Control + Option + #
यदि तपाई म्याकमा क्रोम ब्राउजिङ गरिरहनुभएको छ भने Ctrl + Option +4बाट तपाई आफ्नो फ्रेन्ड लिस्टलाई हेर्न सक्नुहुन्छ । कम्प्युटरमा क्रोमका लागि तपाई Alt + m बाट तपाई नयाँ म्यासेज सुरु गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईंले यी सबै शर्टकट भुल्नुभयो भने वा अप्ठेरो रहेछ भनेर झन्झट लाग्यो भने अर्को सजिलो तरिका छ । यी सबै शर्टकट तपाईले Facebook.com मा गएर केवल Shift + ? प्रेस गर्नसक्नुहुन्छ । त्यसपछि यी सबै जानकारी एकैचोटी पप आउट भएर तपाईको स्क्रीनमा हाजिर हुनेछ ।
भारतमा बसभित्र अश्लिल हर्कत गर्ने एक जोडीको भिडियो भाइरल (भिडियोसहित)